डाँडाको वरपिपल चलचित्र हलमा रिलिज ,किन हलमा गएनन् त दर्शक ? यसका प्रमुख दुई कारण छन् - साँचो खबर Online Khabar
लामो समयको अन्तरालमा हिजो एउटा नयाँ नेपाली चलचित्र हलमा रिलिज भयो । दशैंको अवसरमा रिलिज गरिएको चलचित्रले दर्शकलाई हलमा फर्काउने आशा आम चलचित्रकर्मीले राखेका थिए ।
दसैंको विदामा यो चलचित्रले राम्रै संख्यामा दर्शक तान्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दोस्रो दिनमै फिल्मको व्यापार दयनीय देखिएको छ । फिल्मी भाषामा भन्दा ‘डाँडाको वरपिपल’ ले पानी पनि माग्न पाएन ।किन हलमा गएनन् त दर्शक ? यसका प्रमुख दुई कारण छन् ।
पहिलो त कोरोनाको लहर केही शान्त भए पनि समाप्त भएको छैन । अहिले पनि मानिसहरु भि’डभाडसँग ड’राइरहेका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्र वाध्यात्मक नभएकाले ‘रिस्क’ लिन कोही पनि चाहिरहेका छैनन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि दर्शक हलमा आएका छैनन् ।